Raha nanana fifanarahana haavo momba ny serivisy ny orinasa (slå) izay nanome antoka fa ho avy dia tsy nisy backup ary fanarenana fahaiza-manao amin'ny ambaratonga kaonty. Nanjavona ny asanay ary tsy nanana loharanom-pahalalana na fahaiza-miasa hamerenana azy amin'ny kaontina ny orinasa. Na dia mety nampiharina indray aza ny volavolainay, ny vinaninay sy ny mpanjifantsika rehetra asa voafafa. Mazava ho azy fa tsy nisy fomba namerina an'io tahirin-kevitra manakiana sy sarobidy io. Mino aho fa very an'arivony maro isika, raha tsy vola an-tapitrisany. Ny sehatra dia namoaka anay tamin'ny fifanarahanay ary nandao ahy avy hatrany ny fandaharan'asan'izy ireo.
Zava-dehibe ny manazava fa ny Salesforce tsy antony voalohany mahatonga ny fahaverezan'ny data. Raha ny marina, izaho manokana dia tsy mbola nahita maso azy ireo nanimba ny angon-drakitra mpanjifa. Nisy fahatapahana data indraindray, saingy tsy mbola nahita loza aho (mandondona amin'ny hazo). Ary koa, Salesforce dia manana fahaiza-manao fanondranana ho an'ny angon-drakitra marobe azo ampiasaina, saingy tsy mety izany satria mitaky fananganana nomaniny ho solon'izay, fandaharam-potoana, tatitra ary fahaiza-manao hafa manodidina azy ho feno vahaolana fanarenana loza.
Rogue Applications - miaraka amin'ny fifanakalozana matanjaka ny fampiharana an'ny antoko fahatelo, dia misy foana ny vintana mety hamafana, hanongotra na hanimba ny angon-drakitrao ny sehatra iray.